Akwụkwọ ndị a ga-ebipụta na 2018 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ ndị a ga-ebipụta na 2018
Na mbata nke afọ ọhụrụ, anyị ga-ele anya na ọnwa iri na abụọ na-esote na ihe ịtụnanya niile ha nwere maka anyị. Abịa na ụwa akwụkwọ, afọ 2018 na-ekwe nkwa ụfọdụ aha ga-atọ ndị hụrụ akwụkwọ ozi ụtọ, akụkọ ndị na-anụ ọkụ n'obi na akaebe na-agbasaghị. Site na ọrụ ọnwụ nke Roberto Bolaño na nloghachi nke Mario Vargas Llosa, ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe na-adọrọ mmasị akwụkwọ a ga-ebipụta na 2018.
1 Nkwado nke ndị nledo, nke John le Carré dere
2 N'ime ha, nke Richard Ford dere
3 Mkpụrụ Witch ahụ, nke Margaret Atwood dere
4 Ngosipụta nke oge, nke Leonardo Padura dere
5 Mma ụra, nke Stephen King na Owen King dere
6 Onwe eserese na-enweghị m, nke Fernando Aramburu
7 Oku nke ebo, site na Mario Vargas Llosa
8 Nwanyị Na-acha Uhie nke Orhan Pamuk dere
9 Poetry jikọtara ọzọ, nke Roberto Bolaño
10 Gbuo onye isi, site n'aka Haruki Murakami
Nkwado nke ndị nledo, nke John le Carré dere
Bọchị Mgbasa Ozi: Jenụwarị 9, 2018
Onye kacha mara amara na ọrụ le Carré, George ọchị, protagonist nke Onye nledo nke sitere na oyi na Mole, na-alaghachi mgbe afọ iri abụọ gasịchara ndị nledo. N'oge a, na mgbakwunye na onye nledo a ma ama, ọ ga-abụ onye na-eso ụzọ ya, Peter Guillam, ka a ga-akpọ oku na London mgbe nyocha nke otu ndị na-enweghị ebe nchekwa na Agha Nzuzo na nke onye edemede ahụ na-atụgharị akụkọ abụọ yiri nke ahụ ga-eme ka onye na-agụ ya nwee obi abụọ.
N'ime ha, nke Richard Ford dere
Bọchị Mgbasa Ozi: Jenụwarị 10, 2018
Otu n'ime nnukwu ndị edemede America laghachi na-akpachi anya karịa mgbe ọ bụla na-aga n'ihu nke ederede autobiographical nke "nne m", edere ihe karịrị afọ iri atọ gara aga. Ihe si na ya pụta bụ "N'etiti ha", nke Ford na-akọ akụkọ banyere ndị mụrụ ya, ụmụ okorobịa abụọ si America miri emi merụrụ site na nkụchi obi nna nna Ford mgbe ọ dị naanị afọ iri na isii. Ezigbo ọrụ nke onye edemede ahụ na-enyocha ihe nzuzo ya dị oké ọnụ ahịa ma rute n'ụlọ ahịa akwụkwọ Spanish n'okpuru akara Anagrama.
Mkpụrụ Witch ahụ, nke Margaret Atwood dere
Bọchị Mgbasa Ozi: Jenụwarị 11, 2018
Mgbe ihe ịga nke ọma nke nsonso Akụkọ Nwaanyị, mmegharị nke akwụkwọ akụkọ dystopian a ma ama nke edepụtara na 1985, Canadian Margaret Atwood laghachiri na 2018 ya na ọrụ ya bụ Mkpụrụ Witch. Tụtara ime ka nkowa nke Shakespeare "The Tempest", akụkọ a metụtara Maazị Duke, nwoke na-agba mbọ ime ka echiche ndị mkpọrọ nwere banyere ụlọ ọrụ mgbazi site na ụlọ ihe nkiri, yana The Tempest bụ egwuregwu nke akwụkwọ ahụ gbara gburugburu. Ntụle mbụ ahụ adịbeghị ogologo ọbịbịa na ọtụtụ na-arịọrịrị Atwood ka ọ gbanwee ọrụ niile nke ọgụgụ isi Bekee.
Ngosipụta nke oge, nke Leonardo Padura dere
Bọchị Mgbasa Ozi: Jenụwarị 16, 2018
Nna ukwu nke unyi n'ezie laghachi na afọ a na akwụkwọ ọhụrụ na ogwe aka: nghọta nke oge, nke ndị na-agụ ga-agbaso ihe omume nke Onye na-eme nchọpụta Mario Conde. N'oge a, na otu n'ime ọnọdụ dị oke egwu nke agwa megide obodo Cuban, Conde nakweere iwu nke enyi ochie nke ezuru nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ketara n'aka nna nna ya, onye kpọtara ya na Pyrenees Catalan n'oge na-adịghị anya agha obodo. Akụkọ omimi nke na-abanye n'ime ala ala nke Havana na nke na-ewepụ otu netwọkụ nke ndị na-ere ahịa nka rue mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nzuzo.
Mma ụra, nke Stephen King na Owen King dere
Bọchị Mgbasa Ozi: February 1, 2018
E bipụtara ya na 2017 na United States na usoro ịmegharị usoro telivishọn n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ, Mma Ihi ụra na-egosi mmalite nke mmekọrịta n'etiti eze nke ụjọ na nwa ya na mgbakwunye na nyocha ọ na-enyocha mbara igwe dị ka ọganihu ugbu a dị ka nwanyị. N'obodo Dooling, Sheriff Lila na-ezere ihi ụra na kọfị na cocaine, na-anwa ịdaba na ọrịa na-ehi ụra nke na-eme ka ụmụ nwanyị na-ehi ụra ma kpọtee ha na obere cocoons. Jọ na ihe omimi na mmetụ nwanyị ha weghaara ọrụ Eze nke ndị na - agụ Spanish ga - eripịa bido n’ọnwa ọzọ.
Onwe eserese na-enweghị m, nke Fernando Aramburu
Bọchị Mgbasa Ozi: February 27, 2018
Mgbe ihe ịga nke ọma (na-agbakwunye) nke Patria, Aramburu na-ebipụta ederede nke aka ya na ngwụcha February. N'etiti etiti akụkọ ọdịnala na edemede ahụ, Esere onwe onye na-enweghị m bụ akwụkwọ nke onye edemede na-ekwu maka onwe ya, kamakwa banyere ndị na-agụ ya, gbasara ịhụnanya, ezinụlọ, ụjọ ma ọ bụ owu ọmụma, na-eme ihe mmetụta nke iji mikpuo onwe ya obere nke nta nke nta, na-esi na peeji ọ bụla ụtọ.
Oku nke ebo, site na Mario Vargas Llosa
Bọchị Mgbasa Ozi: Machị 1, 2018
Na-esochi mbipụta nke ajụjụ ọnụ ya Mkparịta ụka na Princeton ikpeazụ September, Vargas Llosa laghachi afọ a na a ọhụrụ edemede na nke nyochaa echiche ha. Kemgbe ọ mikpuru na Cahuide, otu ndị kọmunist nzuzo, site na nhọpụta ya maka onye isi oche nke Peru na 1990, onye edemede nke Pantaleón na ndị ọbịa, bụ ndị kwuru afọ ole na ole na ọ gaghị eleta mpaghara ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kwupụtara echiche ya nke bụ otu n'ime akwụkwọ ndị a kacha atụ anya ka ebipụta na 2018.
Nwanyị Na-acha Uhie nke Orhan Pamuk dere
Bọchị nbipụta: Machị 15, 2018.
Onye ode akwukwo Turkish nke kacha ewu ewu taa na onye mmeri nke Nobel chọr'inwe na Akwụkwọ na 2006, rutere ụlọ ahịa akwụkwọ nke mba anyị site na nsụgharị nke akwụkwọ ọhụrụ ya, nke e bipụtara na 2017. Nwanyị ahụ nwere ntutu na-acha uhie uhie bụ akụkọ ifo, akụkọ banyere nchọpụta onwe onye nke na-enye otu onye na-egwupụta ihe ochie na onye ọrụ ya, zitere iji chọta mmiri na ndagwurugwu ọzara dị nso na Istanbul. Mgbanwe nke egwuregwu ahụ na-abịa mgbe nwa okorobịa ahụ zutere otu nwanyị dị omimi na-acha uhie uhie n'obodo dị nso.
Poetry jikọtara ọzọ, nke Roberto Bolaño
Bọchị Mgbasa Ozi: Eprel 12, 2018
N'agbanyeghị na ọ bụ akụkọ banyere okpueze Bola crowno dịka otu n'ime nnukwu ndị edemede Latin America dịkọrọ ndụ, onye edemede nke nwụrụ na 2003 na-eche mgbe niile dị ka onye na-ede uri karịa onye edemede. Ihe akaebe nke a bu ulo oru ndi dere banyere ihunanya, onwu na nka di na Poesía reunida, akuko ochie nke a ga-ebiputa n’afọ a tinyere ya Akụkọ zuru ezu, ndị ọzọ kachasị atụ anya ọrụ nke onye okike nke The Wild Detectives.
Gbuo onye isi, site n'aka Haruki Murakami
Bọchị mbipụta: Fall 2018.
Gbaso iwe ahụ kpatara mbipụta ya n'afọ gara aga na Japan, ntụgharị nke Na-egbu Onye Ọchịchị, ọrụ ikpeazụ nke Murakami ga-abata n’afọ a n’ala anyị. Onye na-akwado ya, na-asọpụrụ ndị agha nke ndị a tara ahụhụ na mbara igwe, bụ onye na-ese ihe osise gbara alụkwaghịm n'oge na-adịbeghị anya nke kpebiri ịkwaga n'ụlọ dị n'ugwu ebe ọ ga-achọpụta ihe osise dị omimi nke onye nwe ya gara aga isiokwu ya bụ "Igbu Ọchịagha" A ga-ebipụta akwụkwọ a na mba anyị na ụbọchị dị nso na Nobel Prize in Literature, otuto ebighi ebi nke onye edemede Tokyo na-eguzogide.
Kedu akwụkwọ n'ime akwụkwọ ndị a ga-ebipụta na 2018 bụ nke ị na-atụ anya ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ ndị a ga-ebipụta na 2018
Anyị na Ana Rivera Muñiz na Fátima Martín Rodríguez na-ekwu okwu, onyinye Torrente Ballester 2017
Afọ 68 na-enweghị George Orwell